Otu esi etinye VLC Media Player na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
July 5, 2021 June 13, 2021 by Jọshụa James
Wụnye VLC na SNAP Manager
Wụnye VLC na APT Package Manager
Malite VLC Media Player
Nhọrọ - Tọọ VLC ka ọ bụrụ ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi
VLC Media Player bụ mmemme ngwanrọ bụ ọkacha mmasị n'efu na mepere emepe n'etiti ọtụtụ ndị ọrụ kọmputa n'ofe sistemụ arụmọrụ niile, ma ọ bụrụ Windows, Linux ma ọ bụ MacOS. Akụrụngwa cross-platform nwere ike ịkpọ ọtụtụ ụdị faịlụ multimedia na DVD, CD ọdịyo, VCD na usoro mgbasa ozi ndị ọzọ.
Ntuziaka anyị ga-egosi gị ụzọ abụọ ịwụnye VLC Media Player na Ubuntu 20.04 LTS Focal maka ndị ọrụ Ubuntu. Agbanyeghị, enwere ike iji otu usoro ahụ maka 20.10 na 21.04.
Ị ga-achọ ịnweta mgbọrọgwụ ma ọ bụ aha njirimara nwere ohere sudo iji wụnye VLC maka Ubuntu.
Nhọrọ nke mbụ ga-abụ ịwụnye VLC na ọnyà dịka ha bụ ngwugwu ngwanrọ na-akwado onwe ya na ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ gụnyere mgbe ị wụnye ngwanrọ na nhọrọ snap. A na-emelite snaps VLC mgbe niile ma e jiri ya tụnyere nhọrọ APT. Agbanyeghị, akụkụ dị ala bụ ojiji diski buru ibu karịa nyere ka snaps si arụ ọrụ yana chekwaa data.
Mepee ọnụ ọnụ gị wee pịnye iwu snap a.
Usoro ntinye kwesịrị iwe nkeji ole na ole. Ị ga-ahụ mmepụta na-esonụ ozugbo emechara.
A ga-ebudata ma wụnye mmelite na-akpaghị aka na ndabere.
Ọzọ, nhọrọ nke abụọ bụ ịwụnye ngwugwu .deb na onye njikwa ngwugwu dabara adaba. Ebe nchekwa nchekwa Ubuntu na-abịa na ebe nchekwa ihe ọkpụkpọ VLC gụnyere. Agbanyeghị, ọ naghị enweta ọtụtụ mmelite/mwepụta ọhụrụ dị ka ngwungwu snap.
Mepee ọnụ ọnụ gị wee mee iwu na-esonụ ka ịwụnye nke dabara adaba.
A ga-emelite site na nkịtị gị sudo update/ kwalite iwu ma ọ bụ ngwaọrụ nkwalite desktọpụ ngwanrọ.
Imepe VLC dị nnọọ mfe. N'ime ngwa ngwa gị, ị ga-ahụ ngwanro. Pịa ka imepe.
Mgbe ị mepee VLC, ị ga-ahụ ozugbo na-arịọ nweta metadata, họrọ ee ma ọ bụ mba.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịtọ VLC ka ọ bụrụ ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi ndabara, mepee menu ngwa gị wee pịnye ndabara. Wee họrọ nke Ndabere Ngwa iji weta panel ntọala.
Na ntọala panel, họrọ Video adaala igbe, na mgbe ahụ ị nwere ike họrọ VLC media player. Pịa OK, pụọ ​​na ngwa ahụ, ma ugbu a ị na-edozi ya na VLC bụ ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi ndabere.
Ntuziaka ahụ akụzierela gị otu esi etinye VLC na desktọpụ Ubuntu 20.04 gị. Nke a ruru eru nrụnye, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ijighị ya dị ka ọkpụkpọ mgbasa ozi ndabere gị. Ọ dị oke nchebe ma sie ike site n'inwe ike ịkpọ ọtụtụ usoro mgbasa ozi naanị ma ọ bụrụ na ị hụ onwe gị ka ị rapaara otu ụbọchị na-enweghị ike ịkpọ faịlụ.
Otu esi etinye Nginx na Let's Encrypt TLS/SSL na Linux Mint 20